Ungawana sei vhiza yeTurkey kubva kuUS? - ALinks
Unogona kuiwana online pa e-Visa Republic yeTurkey. Vagari vemuUS vanogona kuwana vhiza yekugara pfupi muTurkey, yekushanya, kana yebhizinesi. Kana iwe uchida imwe rutsigiro kunyorera vhiza yeTurkey semugari weUS unogona kushandisa vhiza sevhisi senge iVisa or VisaHQ.
Kuti uwane vhiza yebasa kuTurkey, unofanirwa kunyorera pamwe neako ramangwana mushandirwi muTurkey. Iwe unogona kuzviita kune yako yemuno embassy yeTurkey kana muTurkey, verenga pano nezvekuwana mvumo yekushanda muTurkey. Kana iwe uchida kutsvaga basa muTurkey unogona kuverenga pano kuti ungawana sei basa muTurkey.
Kuti uwane vhiza yemudzidzi, hatina kunyora chinyorwa nezvazvo izvozvi, saka parizvino, tarisa izvi Chinyorwa chaStudee. Asi zvakadaro, iwe unoda nzvimbo yekutanga kudzidza, saka tarisa pano nezvemayunivhesiti akanaka eTurkey.
Parizvino, Kubvumbi 2021, iwe uchiri kuda kutora bvunzo uye zadza chimiro ichi usati wasvika kuti upinde muTurkey, asi kune akagadziridzwa zvirambidzo zvekufamba kuenda kuTurkey chengetedza IATA Yekufamba Center uye bata nhare yako.
Kana iwe uine pasipoti yeUnited States, Unogona kuwana vhiza pamhepo panguva e-Visa peji yeRepublic yeTurkey Elektroniki Visa Kunyorera Sisitimu. Unogona kunyorera chero nguva kana zuva uye unofanirwa kuwana mhinduro mumaawa asingasviki makumi mana nemasere.
Bvunza rumwe rubatsiro kuIVisa
Zvinyorwa Tarisa kwete ehe
Yakawanda sei vhiza yeTurkey kubva kuUSA?
50 US Dollars pamwe nemari yekubhadhara pamhepo, isingasviki madhora maviri kazhinji zvichienderana nenzira yako yekubhadhara. Iyo e-Visa yepamutemo webhusaiti inogamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara.
Vagari vekuUS vanogona kuwana vhiza pavanosvika muTurkey?
Ehe, sekusimbiswa na iyo e-Visa Republic yeTurkey yepamutemo webhusaiti, asi fizi dzako dzinogona kunge dzakakwira. Rangarira kuti pasipoti yako inofanirwa kunge ichiri kushanda kune imwezve mwedzi mitanhatu paunopinda muTurkey kuti utore vhiza. Waimbove uine mari yako mumari muUS dollars, kana dzimwewo mari dzeEuropean dzakaita seEuro kana maPondo eBritish. Asi zvinogona kuitika kuti izvozvi zvinoita kubhadhara nekadhi kana zvimwe nhandare zhinji muTurkey dzakagadziridzwa.
Kwemwedzi mitanhatu usati wasvika kuTurkey, pasipoti yako inofanirwa kunge iri yechokwadi.
e-Visa inoshanda chete mukushanya uye zviitiko zvebhizinesi, kwete zvebasa kana kudzidza.
Nekudzvanya "Nyorera Izvozvi" uye kusarudza chako chizvarwa unogona kuratidza yako e-Visa kukodzera.
Iwe unofanirwa kudzvanya bhatani 'bvumidza' uye enderera nekubhadhara mukati maawa makumi maviri nemaviri zvichitevera kugashirwa kwe 'e-mail kero cheki' meseji. Kana zvisiri, iko kunyorera kunosendekwa. Nekuti iyo system haibvumire uye uchafanirwa kukumbira chishandiso chitsva.
Munguva yekutengesa, kana mubhadharo ukamiswa uye ukatadza kuita, Kunze kwekunge zvataurwa zvimwe, ndokumbira usaite chikumbiro chitsva kana kubhadhara. Zvakare, mune chiitiko chezviitiko zvisina kupera.
Mushure mekubhadharwa, iwe unotumirwa e-mail nekubatana kurodha e-Visa yako. Paunopinda uye wobuda muTurkey, ndapota purinda kana chengeta yako e-visa newe.
Mufananidzo wekuvhara pamusoro uri zvikepe zvinoyangarara muIstambul, Turkey. Mufananidzo na Fabio Santaniello Bruun on Unsplash.
USA vhiza kumaIndia